मलाई थाहा थियो । धेरै दिनदेखि यो नामले मलाई पिछा गरिरहेको छ । मेरा प्रत्येक स्टाटसहरुमा लाइक मात्र होइन अलि अस्वभाविक लाग्ने कमेन्ट पनि आउँथे– भारी प्रशंसाका ।
धनीको धन/गरिबको सपना निर्मलाले लक्ष्मीको आमालाई वचन दिइन्, लक्ष्मीलाई पढाइदिने । बदलामा लक्ष्मीले निर्मलालाई घरभित्रको ‘सामान्य’ काममा सघाइदिनुपर्ने भयो । गरिबी लक्ष्मीकी आमाको सबैभन्दा ठूलो शत्रु थियो ।
दिदी | दिल महरा
जुम्ल्या भाइहरुले बटुकाको भात छोडेर थालमा भात खानका लागि झगडा गर्ने भए । अनि, एक दिन कालो सुँगुरको एउटा पाठो बेच्नुभो बाले । दुइवटा सिलबटको नयाँ थाल किन्न भनी । बा, अर्को दिन बिहानै ...
नयाँ लुगा | बसन्त विवश आचार्य
पारी बस्तीबाट फुत्त झर्दै गरेको लाहुरेको “अच्छा लेकिन”ले वारि गाउँसम्म ध्वनि प्रदूषण गरेको छ । कालापहाडबाट सपना र रहरमा थोरै खुसीको जलप लगाएर जुँगामा ताउ लगाउँदै फर्किनेहरु विश्वविजेता नेपोलियनको अनुहार चोरेर ...
मेवाडकी रानी ! म उनको राजा बन्छु कि बन्दिनँ मलाई नै थाहा छैन तर उनी मेरी मनकी रानी बनिसकिन् । पाठक मित्र, तपाइँलाई लाग्ला उसो भए किन रानी ? यसमा मेरो तर्क के छ भने, ...
गरिबको दशैं | दीपक घिमिरे
- दीपक घिमिरे घरदेखि अलि परको डिलमा कपडा सिलाउने कल (सिलाई मेसिन) राखेर खोल्सामा रने दाइले सु गर्न ला’को टाढैबाट देखें । खुशीको सीमा नै रहेन । चिच्याउँदै घरभित्र छिरेर आमालाई सुनाएँ– ‘आमा ...
– दीपक शर्मा ‘समीर’ हिजो बिर्खे र सदिश हुर्केको पुरानो झुपडी । आँगनमै रहेको नास्पतिको बुढो जवानी छिचोलिरहेको चौतारो । त्यही चौतारो, नजिकैबाट कुदिएको गोरेटो । दुबैतिर रहेका स–साना खरले ओतेका झुपडीहरुकै आँगन चुम्दै ...
पुनरावृत्ति | मन्दिरा मधुश्री
आज बाह्र बर्षपछि अडिटको सिलसिलामा पुनः यो ठाउँ आइपुगें । शहरदेखि टाढा, सुविधारहित यो गाउँ । पैदल हिड्नुपर्ने । खुल्ला धुले बाटो । चर्को घाम । गर्मी र थकाइले मलाई लखतरान पारेको थियो । अफिसको क्वार्टरमा ...